TajCoin စျေး - အွန်လိုင်း TAJ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို TajCoin (TAJ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ TajCoin (TAJ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ TajCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $12 900.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ TajCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
TajCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TajCoinTAJ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00362TajCoinTAJ သို့ ယူရိုEUR€0.00307TajCoinTAJ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00277TajCoinTAJ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0033TajCoinTAJ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0328TajCoinTAJ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0229TajCoinTAJ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0808TajCoinTAJ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0136TajCoinTAJ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00484TajCoinTAJ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00506TajCoinTAJ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0811TajCoinTAJ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.028TajCoinTAJ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0197TajCoinTAJ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.271TajCoinTAJ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.61TajCoinTAJ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00497TajCoinTAJ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00549TajCoinTAJ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.113TajCoinTAJ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0252TajCoinTAJ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.383TajCoinTAJ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩4.3TajCoinTAJ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.39TajCoinTAJ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.267TajCoinTAJ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.1
TajCoinTAJ သို့ BitcoinBTC0.0000003 TajCoinTAJ သို့ EthereumETH0.000009 TajCoinTAJ သို့ LitecoinLTC0.00006 TajCoinTAJ သို့ DigitalCashDASH0.00004 TajCoinTAJ သို့ MoneroXMR0.00004 TajCoinTAJ သို့ NxtNXT0.267 TajCoinTAJ သို့ Ethereum ClassicETC0.000525 TajCoinTAJ သို့ DogecoinDOGE1.07 TajCoinTAJ သို့ ZCashZEC0.00004 TajCoinTAJ သို့ BitsharesBTS0.139 TajCoinTAJ သို့ DigiByteDGB0.123 TajCoinTAJ သို့ RippleXRP0.0126 TajCoinTAJ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000123 TajCoinTAJ သို့ PeerCoinPPC0.0119 TajCoinTAJ သို့ CraigsCoinCRAIG1.63 TajCoinTAJ သို့ BitstakeXBS0.153 TajCoinTAJ သို့ PayCoinXPY0.0625 TajCoinTAJ သို့ ProsperCoinPRC0.449 TajCoinTAJ သို့ YbCoinYBC0.000002 TajCoinTAJ သို့ DarkKushDANK1.15 TajCoinTAJ သို့ GiveCoinGIVE7.75 TajCoinTAJ သို့ KoboCoinKOBO0.813 TajCoinTAJ သို့ DarkTokenDT0.00333 TajCoinTAJ သို့ CETUS CoinCETI10.33